सवै नागरिकहरुका लागि कसले सोच्ने ?
आज मानिसहरु आफ्नो पार्टी, आफ्नो नाता, आफ्नो भाइबन्धु र आफ्नो इष्टमित्र भन्दै सवैले नजिककोलाई मात्र अवसर दिएको अवस्था छ । जो शक्तिमा छ, उसले यस प्रकारले काम ग¥यो भने आम नागरिकहरुले कहिले पनि अवसर पाउन सक्दैनन् । अवसर भनेको योग्यता र क्षमताले पाउनुपर्छ । कसैको आफन्त भएकै आधारमा या कुनै पार्टीको कार्यकर्ता भएकै आधारमा अवसर पाउने हो भने सर्वसाधारण नागरिक सधैं अन्यायमै पर्दछन् ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदा समेत मानिसहरुले सजिलै अवसर पाउन सकेको अवस्था छैन । जे मा पनि राजनीति जोड्ने गलत परिपाटीले पार्टीमा क्रियाशिल नभएका व्यक्तिहरुलाई कतै पनि महत्व दिईएको छैन । जबसम्म कार्यकर्ता हेर्दै अवसर बाँड्ने गरिन्छ, तबसम्म आम नागरिकहरुको हितमा राज्य व्यवस्था हुनै सक्दैन । राजनीतिमा लोकप्रिय हुन सवै जनताको भलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ । हिजो आज स्थानीय सरकारहरुले पनि गलत राजनैतिक संस्कारलाई प्रोत्साहन दिएका छन् । सरकारमा जुन पार्टीका मानिसहरु छन्, तिनीहरुले अरुलाई मान्छे नै गन्दैनन् । यसरी आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताबाहेक अरुलाई मान्छे नै नभन्ने गलत संस्कार हावि हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै खराब पक्ष हो । कार्यक्रम, तालिम, योजना, सिफारिस लगायत हरेक क्रियाकलापमा आफ्नो पार्टी हो कि होईन भनेर खोज्ने गलत परिपाटीले सर्वसाधारण नागरिकहरु निराश बनेका छन् । कतिपय स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले त आफ्नो पार्टीको होइन भने सहयोग गर्न सक्दैनौं भनेर हाकाहाकी समेत भनेको भनेर जनताले गुनासो गरिरहेका छन् । यसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निरंकुश चरित्र प्रदर्शन गर्नु पक्कै पनि राम्रो कुरा होईन ।
नातावाद् र आफन्तवाद् विशेष गरी कर्मचारीतन्त्रमा लागु भएको छ । आफ्नो मान्छेले काम गर्न नजानेको भए बरु काम गर्ने तरिका सिकाईदिने, प्रक्रिया पुर्याउन नसकेको भए प्रक्रिया पुर्याउन सहयोग गर्ने तर अरुलाई कुनै पनि उचित सरसल्लाह नदिएर अलमल बनाईराख्ने नियत राख्ने गरेको पाईन्छ । जसले गर्दा जो पदमा छ, जो शक्तिमा छ, जो पहुँचमा छ, उसले मात्रै सवैखाले क्षमताको विकास गर्न सक्छ, उसले मात्रै सवै प्रकारको प्रक्रियाहरु पुर्याउन सक्छ र उसले नै कागजी रुपमा पनि बलियो हुने अवसर पाउँछ ।
आज देशकै मुटु र प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा बेचेर खान हिम्मत गर्दैछन् । आज शक्तिमा हुनेहरुले सरकारी स्वामित्वको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएका छन् । शक्तिमा हुनेहरुले राज्यले दिने विभिन्न प्रकारको सेवा सुविधा उपयोग गर्न पाएका छन् । अनावश्यक भ्रमण गरेर नागरिकहररुको टाउकोमा अनावश्यक भार थपिरहेका छन् । पारिवारिक भ्रमण समेतको अवसर मिलाएका छन् । शक्ति र विधि दुवैमा पहुँच हुनेहरुले सर्वसाधारण नागरिकहरुको लागि सोच्ने सम्म पनि फुर्र्सद छैन । यसरी शक्तिमा हुनेहरु झन झन शक्तिशाली हुने, धनिहरु झन् झन् धनि हुने, सत्तामा पुगेकाहरु झन झन निरंकुश बन्दै जाने व्यवस्थाबाट नागरिकहरुले राहत पाउने अवस्था देखिदैन ।
अतः नागरिकहरुले प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्, सवै नागरिकहरुका लागि कसले सोच्ने ? सवै नागरिकहरुको लागि कसले काम गर्ने ? सवै नागरिकहरुको भलाइका लागि को अगाडि सरिदिने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरु नागरिकहरुले अगाडि सारेका छन् । जो आज अनुत्तरित भएका छन् ।